Baaskiilka Shiinaha oo laalaadaya baaskiil koronto - EMB102 warshadle iyo soosaarayaal | Yizhicheng
Iska yaree waxyar jilicsan, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay baaskiil ama aad rabto inaad sii wadato ciyaartaada. Waxaan ogsoonahay in jimicsigu leeyahay tiro badan oo faa'iidooyin ah, taasna, taasna, Dowladda Mareykanka waxay soo jeedineysaa inaan dhammaanteen helno ugu yaraan 2.5 saacadood oo jimicsi jimicsi dhexdhexaad dhexdhexaad ah asbuuciiba.
Tani ebike oo leh qaabeyn aad u sarreeya, jir aluminium aluminium ah, 48V 10.4AH batari lithium, 48V 500W isku-dhafan wheel wheel, shimano shimano tourney 7 xawaare, xawaare 32km / h max, barakacayaasha LCD. Qiimaha aad u tartan badan ($ 369- $ 389 / PC) marka loo eego qty amar kala duwan. Ku soo dhowow inaad nagala tashato haddii aad wax dhib ah ku qabtid. Waxaan qaban doonnaa adeegga 24ka saacadood ee khadka tooska ah!
Biyo > 500w
Cabbirka Gawaarida 20 ""
Gawaarida Caday la’aan, 48V / 500W
Qalabka Frame Aluminium Alloy
Isku laabma Haa
Xawaaraha ugu badan 30-50km / saacadiiba, 32km ama la amro
Nambarka Model EMB102
Magaca badeecada Baaskiilka korantada Mountain
Qaabka alloy, TIG welded
Fargeeto ku dhuftay, TIG welded
Fariin bir-dishi birkiyeed
Cuff Set Alloy cabitaan
Gear Set SHIMANO TOURNEY 7 xawaare
Bateriga 48V / 10.4AH, batari Lithium
Nidaam LCD guddi
(Waa inuu noqdaa sicirka FOB qiimaha) 2-103 Gooyaa
104-259 Goos Goos
> = 260 Goos goos
Cabbirka xirmada oo hal ah: 80X45X78 cm
Miisaan culus 33,0 kg
Nooca xirmada: SKD 85%, hal goonkiiba kartoon kasta oo la qaadi karo
Meelaha arjiga Baaskiilka korantada Mountain
Waxay u oggol yihiin jimicsi jimicsiga jimicsiga joogtada ah
Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale ognahay in Rome aan la dhisin maalin. Markaa kuwa inaga mid ah ee u baahan xoojin yar oo naga caawisa sidii aan u higsan lahayn yoolalkaas waara, bushkuleyaasha korantada waxay baaskiillada u suurta geliyaan dad aad u ballaaran, iyagoo gargaar ka siinaya buuraha, xamuulka iyo masaafada dheer.
Taasi waxay khusaysaa haddii loo isticmaalayo socodka ama jimicsiga kaligood. Si kastaba ha noqotee, waxay kuu oggolaaneysaa inaad hore u sii dheeraato. Natiijooyinka ayaa muujinaya in dadka isticmaalaya baaskiillada korantada ay sameeyaan jimicsi ka badan sidii hore haddii kale haddii loo baahdo in kastoo ay jiraan caawinaad dheeri ah, saameynta garaacista ayaa ah inay soo fiicnaadeen jimicsiga jimicsiga jirka iyo dufanka jirka oo yaraada.
Hore: Gawaarida gawaarida gawaarida ee 3kw koronto - GGB101
Xiga: Mootada korantada - ES101